ILIFE H70, isihlanza esingenazintambo obusifunile | Izindaba zegajethi
URafa Rodríguez Ballesteros | 24/08/2021 18:00 | General, Ikhaya
Kubukeka sengathi leyo "fashini" yokuzimela yokuhlanza iyisinyathelo esincane, noma cha. Kepha ngasikhathi sinye ziyachuma ezinye izinhlobo zokuhlanza umshini ezinikela mhlawumbe ngomuzwa othembeke ngokwengeziwe ukuhlanzwa kwasekhaya. Kusobala ukuthi lezo zokuhlanza ezinkulu ezinezintambo ezinde kakhulu zingene emlandweni. Futhi bayazinza emakethe izihlanza ezingenantambo. Namuhla sikhuluma ngakho ILIFE H70.
Umqondo wezinto zokuhlanza kulabo abangathembi ukuthi imoto encane e-oval idonsa umoya wonke amakhona endlu. Ukungakhulumi nge- umehluko ngamandla esingawuthola phakathi kwe- «conga» yokuhlanza uhlobo lokuhlanza kanye ne-vacuum cleaner ephathwa ngesandla. Kwabaningi, ithuluzi elingcono kakhulu lokuhlanzwa ngokuphelele kwazo zonke izingxenye zendlu noma zehhovisi lethu.
1 ILIFE H70 isisombululo sokuhlanzwa kwasekhaya
2 ILIFE H70 yekhaya lakho
ILIFE H70 isisombululo sokuhlanzwa kwasekhaya
Uma uthanda ukujabulela i- imvelo ehlanzekile ekhaya futhi ukhathazeka ngokuyihlanzela, kubalulekile ukuba nosizo ngangokunokwenzeka. Phakathi kwamathuba angapheli esingawathola namuhla emakethe esizokhuluma ngawo ILIFE H70, umshini wokuhlanza engenantambo, eguquguqukayo futhi enamandla angaphezu kwamandla. Sithola izingcezu ezahlukahlukene nezesekeli endaweni ngayinye nendawo endlini.
Mbambeni ILIFE H70 yokuhlanza intengo engcono kakhulu
Kuya ngothuli nohlobo lwendawo esingayisebenzisa izinhlobo ezimbili zamandla okudonsa. Amandla evamile, elusizo kunoma isiphi isimo ngamandla okudonsa 10 Kpa. Noma singenza kusebenze imodi esiphezulu esizothola ngayo amandla okudonsa okungaphezu kokuphindwe kabili nge 21 Kpa, ukuze kungabikho sici sothuli ongamelana naso.
Ngibonga wakho motor engenamabhulashi enamandla Sizothola wonke amandla adingekayo ngendlela ethule kakhulu. Bala kanye Isitsha sokungcola esingenalutho esinamandla afinyelela ku-1,2 amalitha. Futhi konke okwakhe izingxenye ziyasuswa futhi ziyagezeka ngisho nasemshinini wokuwasha izitsha. Ukuma kwayo okulingene nesibambo se-ergonomic kusivumela ukuthi sishaye phansi ngokuphelele, kepha futhi nezindawo eziqondile noma uphahla.
ILIFE H70 yekhaya lakho
Enye yemininingwane ebalulekile okufanele siyinake lapho sifuna ukuthola umshini wokuhlanza ukuzimela okwazi ukusinikeza kona. ILIFE H70 ngu ifakwe ibhethri lama-2500 mAh. Inkokhelo ezosivumela yakho ukusetshenziswa okuqhubekayo kuze kube yimizuzu engama-40 kumodi "ejwayelekile". Futhi yini esingaba nayo I-1% ikhokhiswe futhi ngaphansi nje kwamahora ama-5.
I-Los izesekeli zanoma yiluphi uhlobo lokuhlanzaa, kanye nobumnene bamakhanda ayo ambozwe ngezinto ezingalimazi ifenisha noma izindonga, kukwenza ithuluzi lokugcina. Swivel kuze kube ngu-180 degrees nokuthi izihlalo noma imilenze yetafula ayishiywa ingcolile. Kuze kwadingeka ukukhanyisa ngamalambu e-LED kulawo makhona angabonakali kahle.
Uma ILIFE H70 engenantambo ebanjwa ngesandla i-vacuum cleaner yilokho obukufuna yenze eyakho ngentengo engcono ku-Aliexpress ngaphandle kwemali yokuthumela. Ungabe usalinda isikhathi eside ukuze indlu yakho ibukeke ihlanzekile njengoba kufanele. Futhi kuye kwaba njalo ithuluzi lokuhlanza lokugcina ngaphandle kokuthi usebenzise imali engaphezu kwalokho okudingekile.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » General » ILIFE H70, umshini wokuhlanza ongenantambo obewufuna